पाप धुरीबाट कराउछ – हामीले बिर्सिन्छौ
By administrator on	 June 4, 2020 देश, धर्मसंस्कृति, फोटो फिचर, बाइलाइन, बिचार, स्थानीय
तपाईहरु कुन समाजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? ठुलो जात ? सानो जात ? यो त्यही समाज हो जहाँ एक पुरुषको २,३जना सम्म श्रीमति छन, यो त्यही समाज हो जहाँ बाउबाट छोरी बलात्कार भएको समाचारहरु दैनिक जस्तो आउछन । यहाँ उच्च जात भनिएका कै घर भित्र परिवारका सदस्यको आवज दबिएको छ, आफु र आफ्नै परिवारका सदस्य नैतिक पतन भएका छन तर दुर्भाग्य तिनैले समाजमा छुवाछुतको पक्षमा ठुलो आवाज गर्छन ।
मान्छेले जब जब ऎना उठाउछ्न पहिला आँफैले हेर्न गर्नुस अनी बल्ल अरुलाई देखाउने प्रयास गर्नुस् । प्रेम अन्धो हुन्छ, प्रेमलाई बिहेमा परिणत गर्ने सबैको चाहना पुरा हुन्छ भन्ने नै छैन, प्रेम जात हेरेर पनि हुँदैन मन हेरेर हुन्छ । कुनै ब्यक्तीले बनाएको मुर्ती मन्दिरमा पुजिन्छ, तर त्यही ब्यक्ति मन्दिरमा पुग्ना साथ त्यो मन्दीर नै बिटुलो भहिदिन्छ! त्यो मुर्ति त तिम्रो आफ्नो परिश्रम होनि, त्यो मुर्तिले त उच्च स्थान पाउना साथ तिम्लाई बिर्सेछ नि ? त्यही मुर्तिले तिम्लाई बोलाउन किन सकेन ?सिलाएको लुगा लगाउन हुन्छ, फलामका सामान गर गहना सबै चल्छ तर तिनैले लगाएको माया चल्दैन । कसैले बिहेमा बजाएको बाजा चल्छ, तर उनै सँग बिहे चल्दैन । यो कस्तो बिरोधाभाष हो हाम्रो समाजको ?
सानैमा स्कुल जादा आमाले जामाको खल्तीमा एक मुठी मकै राख्दै भन्नु भो, कसैले केहि दिएपनि नखानु, भर्खर खाएर आएको हो भन्न भन्नु हुन्थ्यो । आमाले रात दिन यहि नै सिकाउनु भयो । त्यती बेला मैले देख्थे बाटोमा माग्नेले टाढाबाट आफ्नो पोल्टो थापेको । किन पर बसेर मागेको होला, किन नजिक नगएको होला भन्ने सोच्थे, मेलापातमा काम गर्ने काकीहरुले पनि पोल्टा थापेर खाजा खाएको देख्थे, उहाँहरुलाई कसैले हातमा केहि दिदा छुनै हुन्न जस्तो गरेको देख्थे । अनि हामीलाई पढाउने स्कुलमा पनि छुवाछूत अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर पनि कहिल्यै सिकाएनन । यो सबै देखेर हुर्किदा मलाई पनि छुन नहुने होला भन्ने लाग्थ्यो । तर कारण के हो ? कहिल्यै थाहा नै भएन, लाग्थ्यो परम्परा होला, सबैले मान्नु पर्छ!
एकदिन एउटा बृद्ध आमै घरमा केहि माग्दै आउनु भयो, मलाई के लाग्यो भने यी आमाले पनि मैले छोएको खानु हुन्न होला । म यत्तिकै घरभित्र पसे तर ति आमा घन्टौं सम्म बाहिर कुरेर बस्नु भएको रहेछ । त्यो देखेर मेरो बुवा आमाले मलाई धेरै हपार्नु भयो । घरमा आउनेलाई आफु सङ्ग जे छ दिनुपर्छ, रित्तो हात फर्काउनु हुन्न भनेर बुवाले सम्झाउदा मैले आफुलाई लागेको कुरा डराउदै बिस्तारमा सुनाए । अनि मेरो बुवाले भन्नु भयो – छोरी अछुत ति हुन,जसले आफ्नालाई मारेका छ्न,जसले अरुलाई रुवाएका छन, जसले अरुलाई दबाएको छ, जसले ठुलो जात भन्दै कलंकीत हुने काम गरेको छ । मान्छेको कर्मले जात देखाउछ, थरले होइन … जात धर्म हामी आफैले बनाएको हो, त्यसैले हामी जातको पछी हैन सतकर्मको पछि लाग्नु पर्छ भन्दै बुवाले मलाई त्यस दिन धेरै कुरा सिकाउनु भयो । त्यस पछी सायद म जात के हो, कुजात के हो भन्ने अन्धबिस्वासमा पर्न बाट जोगिए ।
जात छ भनेर के गर्नु ? बाजा बजाएर जात राखेर बिहे गरेको हुन्छ तर श्रीमानको अर्कै श्रीमती पनि छन भन्न कुरा घरकै श्रीमति लाई थाहा हुँदैन, न त श्रीमतीको अरु सङ्गको सम्बन्ध छ भन्ने श्रीमान लाई थाहा हुँदैन । छोरा पाउनै पर्ने बाध्यता, नत्र श्रीमानको प्यारो हुन नसकिने लगायत घरेलु हिंसाले पीडित हजारौ महिला बोल्न सक्दैनन । करोडौ खर्च गरेर गरिका विवाह केही महिना टिक्दैनन । तर हामी यस्ता कुरा बिर्सिएर मन मिलेरै हुने अन्तरजातीय विवाहमा मात्रै समस्या देख्छौ र तल्लो जात भनेर मान्छेलाई अपमानित गर्छौ ।
दलित वा तल्लो जातका बालबालिकाहरु बिभेद र अपमान सहदै हुर्किन पर्छ । पानी पिउने धारामा तिनलाई पानी पिउन नदिने, स्कुलको डेस्क बेन्चमा दलित छन भने पछी अरु उच्च जातीको गएर नबस्ने, क्याम्पसको क्यान्टिनमा छोइएला झै गर्ने – यस्तो बिभेद सबै तिर फैलिएको छ । यस्तो तिरस्कारमा जन्मिएको मान्छेले माया गर्न निधारमा आफ्नो जात लेखेर हिड्नु पर्ने हो र ? अनी आफु भन्दा माथिल्लो जात को केटी सँग माया प्रेम गरेकै भरमा मारिनु पर्दा, श्वास नै फेर्ने नपाउदा, सबै सँगको नाता तोड्नु पर्दा त्यो भन्दा ठुलो सामाजिक बिभेद अरु के हुन सक्छ ? यस्ता धेरै प्रश्न मनमा उब्जिन्छन, तर के भन्ने ले लेख्ने , मुटु र हात नै काप्छन । ठुला भनैदाका शब्दले मनमा तिर हान्छ, तर दलितको मौनताले उसैलाई भित्र भित्रै मारिदिन्छ,यती सबै हुँदा कसरी हेरेर बस्नु, कसरी सुन्नु ? मान्छे र पशुको भेद अब हराएकै हो ?
म मेरा थुप्रै साथीहरु सम्झन्छु जो दलित भनिन्छन । तर उनिहरु को संस्कार, दैनिकी, चालचलन, खानपिन कुनै उच्च ब्राम्हणको भन्दा सुद्द छ ।
म मेरा थुप्रै साथीहरु सम्झन्छु जो दलित भनिन्छन । तर सुख मात्रै होइन दु:ख मा पानी उत्तिकै मायालु छन, सहयोगी छन, अफ्ठेरोमा सधै सङै छन । हुन सक्छ उनिहरुले समाजलाई मैले भन्दा राम्रो सँग बुझेका छन । तसर्थ मलाई लाग्छ हामीले आफ्नो सन्तानलाई दिने भनेको संस्कार हो, राम्रो शिक्षा हो , नैतीक मार्गदर्शन हो , अरुको जातमा प्रश्न गर्न सिकाउने होइन!
दलित शब्द कुनैपनी आमाबुवाले न्वारनमा आफ्नो सन्तानलाई इच्छाले राखिदिएको नाम होइन । मान्छेले मान्छेलाई छुनु हुदैन भन्नेलाई बरु हामीले दलित शब्दको उपनाम दिनुपर्छ ।
हुन त यो सतीले श्रापित गरेको देश हो रे । साना कलिलै उमेरमा आफ्ना श्रीमान गुमाउदा, श्रीमतीलाई श्रीमानसङै चितामा भालाले घोची घोची पोल्थे रे, उनिहरु भक्कानो फुट्ने गरी रुन्थे रे तर बाँकी सबै उनि जीउँदै जलेको हेर्दै बस्थे रे । घरी घरी लाग्छ त्यस्ता सतिको आसुले यो देश अझै पनि श्रापमै डुबेको छ र त यस्ता जघन्य अपराध भएको सुन्न पर्छ ।
एकै खाल्का देखिन्छन् सलाईका ति काटिहरु जुन कोर्दा सम्पन्न बर्गको घरमा उज्यालो छाईदिन्छ भने, त्यही अर्को काटि कोर्दा दलितको घरको खुशी नै खोसिदिन्छ!
मेरो प्रिय दलित साथी हरु – सक्छौ भने तल्लो जाती र अछुतको बिषेषण लिनुपर्ने यो श्रापित भुमीमा जन्म नलिनु। जन्म लिनै परेछ भने कर्मले ब्राम्हण हुनु आचार्य गुरु बन्नु पूजारी बन्नु ता कि कसैले प्रश्न गर्न नसकोस । तिम्रो कर्म प्रती सबैले लम्पसार परेर ढोग गरुन । अझै सक्छौ भने यो जन्ममा तिमीले भोगेका सबै पिडा, उच्च जातीलाई गर्न लगाउनु । तर त्यस दिन छुवाछुत भने नगर्नु, पानी नबार्न्नु , म माथी बिश्वास गर म आफ्नो भगवान परिवर्तन गरेर तिम्रो पुजा गर्ने थाल्नेछु ।